eHimalaya Online || News from nepal » वलिवूड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राले ​​२०२१ मा कियारा आडवाणी संग कहिले गर्दैछन त बिहे ? अभिनेताले बताए यी कुरा ।
वलिवूड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राले ​​२०२१ मा कियारा आडवाणी संग कहिले गर्दैछन त बिहे ? अभिनेताले बताए यी कुरा ।
२०७८ असोज ५ गते मङ्गलबार १२:४४
बलिउड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राले भर्खरै रिलिज भएको फिल्म 'शेरशाह' मा आफ्नो उत्कृष्ट अभिनय संगै मानिसहरुको मन जिते। अभिनेताले फिल्ममा 1999 को कारगिल युद्धका नायक कप्तान विक्रम बत्राको भूमिका निभाएका थिए। फिल्ममा सिद्धार्थ मल्होत्राको...
बलिउड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राले भर्खरै रिलिज भएको फिल्म ‘शेरशाह’ मा आफ्नो उत्कृष्ट अभिनय संगै मानिसहरुको मन जिते। अभिनेताले फिल्ममा 1999 को कारगिल युद्धका नायक कप्तान विक्रम बत्राको भूमिका निभाएका थिए। फिल्ममा सिद्धार्थ मल्होत्राको साथमा कियारा आडवाणी पनि मुख्य भूमिकामा थिईन । कियाराले डिम्पल चीमा अर्थात कप्तान विक्रम बत्राकी प्रेमिकाको भूमिका निभाएकी थिइन्।
केही समयदेखि कयारा आडवाणी र सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​एकअर्कालाई डेट गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ। भर्खरै एक साक्षात्कार मा, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आफ्नो विवाह योजना को बारे मा खुलासा। सिद्धार्थ मल्होत्राले कियारा आडवाणीसँग बिहे गर्ने बारेमा ठूलो खुलासा गरेका छन्।
बलिउड बबललाई दिइएको एक अन्तर्वार्तामा जब सिद्धार्थलाई सोधिएको थियो कि उनी कहिले विवाह गर्दैछन्। अभिनेताले जवाफ दिए, ‘मलाई यो बारेमा थाहा छैन । म कुनै ज्योतिषी होइन। मलाई थाहा छैन कसको लागी यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ ? जब बिहे गर्नेछु, म सबैलाई थाहा दिनेछु।’
प्रकाशित मिति २०७८ असोज ५ गते मङ्गलबार १२:४४